Contact Us - Shandong Better Motor Co., Ltd
waxaan joogaa yay yihiin
Seminaaro & Facilities
R & D Qalabka
Motors Waayo Nadiifinta Machine
Motors Waayo Woodworker Machine & Wixii Gardening Tool
Motors Waayo Machine aerodynamic
Motors Waayo Codsiyada Automotive
Motors Waayo Machine kale Power
NO.3 Lvjie Road, High-tech Zone, Longkou,
Gobolka Shandong, Shiinaha, 265718
Shanghai Trade Branch
Shanghai Jingyun Trade Co., Ltd
dar, Room 590, Dhisidda 2-B, No.188, Hongjing Rd, Degmada Minhang, Shanghai, Shiinaha, 200003
Tel : +86 535 861 2516
Mobile: +86 135 6409 3630
Email: bd@btmeac.com / mkt@btmeac.com
Better gaadhay Higher Annual Outp kale ...
2016 waa sannad kale goosashada Better Motor, sababta oo ah 'taageerada iyo shaqaalaha Better' macaamiisha shaqo adag. Waxaan helayso koritaanka iyo horumarka sanad kasta. saarka Annual ee 2016 waa 2.9 million qaybood, 450,000 nooc Inc ...
Engineer Li Dongwei ka Ohio State Unive ...
On 8 June, Electric Engineering iyo Engineer is Li Dongwei ka Ohio State University USA booqday Shandong Better Motor Co., Ltd. Li Dongwei, cilmi-postdoctoral ka shaybaar saynis korontada ee Ohio ...
kooxda mashruuca ee syste macluumaadka ...
On 26 June, kooxda mashruuca mashruuca nidaamyada macluumaad injineernimada ee Better Motor ah waxaa la aasaasay. Shandong Sanjiang Electric Engineering Co., Ltd waa mas'uul ka ah qaabeynta iyo ka hawlgala mashruucan. Waa uurqaadida ...
New High Xuddunta 16DCT Athlonix ™ Mini Motor
Portescap barayaa motor 16DCT cusub in ay kala duwan DCT Xuddunta sare ee matoorrada Athlonix. The motor 16DCT samatabbixin karaa ilaa Xuddunta joogto ah si ay u 5.24 mNm at dherer ah oo kaliya 26mm. 16DCT The isticmaalaan ma Neodymium awood ...
Sidee lagu nadiifiyo vacuum shuqul caadi ah samayn?
The huufarka kuwa is-hoosaysiiya waa mid ka mid ah qalabka guriga lagu nadiifiyo handiest maanta loo isticmaalo. Its design weli wax ku ool ah oo fudud ayaa iska leh isagoo si aad u nadiifiso Carro iyo qayb kale oo yar yar off sagxadaha by gacanta, iyo tu sameeyey ...